Tenga Kupisa Mafuta & Kukurumidza Kurasikirwa Huremu Nature Hoodia Cactus Extract | WoopShop®
Kudya: Herbal mushoma
Kuwanda: 1 bhodhoro - mashanu mabhodhoro
Muenzaniso Nhamba: 23167
Cactus ine molecule yakafanana neglucose, yakasimba chete. Masayendisiti anotenda kuti molecule iri mucactus 'inonyengedza' muviri kuti utende kuti cactus ichangobva kudya. Mhedzisiro yekudya cactus nokudaro kushaikwa kwakakwana kwechido. Nekuda kwechinhu ichi, nyika dzekumadokero dzakati cactus ndiyo nyowani yechishamiso chekudya.
Cactus yakashandiswa seanodzvinyirira kudya uye kupedza nyota. ikozvino hoodia cactus inova mhinduro inopisa kune yakachengeteka yese-yakasikwa inosimudzira-isina kuremerwa uremu uye inozivikanwa appetite suppressant.
Kubvisa kupisa uye chepfu.
Kukurudzira kutenderera kweropa uye kuderedza BP.
Kushandisa kuonda uye kuderedza uremu, kukurumidza kushanda mukuonda.